China Umzimveliso weRotor yombane kunye neStator mveliso kunye nabenzi | Rumotek
I-Rotor yombane kunye neStator
Ukusebenza okuphezulu kweemoto kunye noyilo lweactuator kufuna ukusetyenziswa kwezixhobo ezityhala imida yesayensi yezinto eziphathekayo. Ukukhethwa kwemagnethi kubalulekile kwaye sinokunceda ekukhetheni izinto ezilungileyo. Ukuthathelwa ingqalelo ngobulumko kukhetho kubandakanya ubushushu, intsalela yokungeniswa, ukunyanzeliswa kunye nokusingqongileyo.Iimoto kunye nezibalo esizenzileyo zisetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zeDC Motors, iiSynchronous Motors, kunye neeStepper Motors ezisetyenziswa kwizicelo zeemoto, iinkqubo zeHVAC, izixhobo, izixhobo zeofisi, kunye izixhobo zonyango.
Ukusebenza okuphezulu kweemoto kunye noyilo lweactuator kufuna ukusetyenziswa kwezixhobo ezityhala imida yesayensi yezinto eziphathekayo. Ukukhethwa kwemagnethi kubalulekile kwaye sinokunceda ekukhetheni izinto ezilungileyo. Ukuthathelwa ingqalelo ngobulumko kukhetho kubandakanya iqondo lobushushu, ukumiselwa okushiyekileyo, ukunyanzeliswa kunye nokusingqongileyo.
Iirotors kunye ne-stators esizenzayo zisetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zeDC Motors, iiSynchronous Motors, kunye neeStepper Motors ezisetyenziswa kwizicelo zeemoto, iinkqubo zeHVAC, izixhobo, izixhobo zeofisi, kunye nezixhobo zonyango.
Ngokukodwa xa iiRotors esizenzileyo zisebenza kakuhle kwinkqubo yolawulo lwamanani (SPC) kulwenziwo lwabathengi kunye nophicotho lwenkqubo yolawulo kwinqanaba lokuvelisa.
I-PMAC yeeMoto ezihambelana neeMoto
Le motor esisigxina semagneti ehambelanayo inikezelwa kuluhlu olubanzi lwee-voltages ezisebenzayo kunye nolungelelwaniso lwesiphumo seshafti. Imoto inikezela ngegalelo lamandla e-1.5 watts kumbane ombane. Ibhokisi yebhokisi eyenziwe ngepeyari inikeza i-torque yokuqala ye-100 oz-in (700 mNm) kwi-1 rpm kwi-voltage elinganisiweyo. Le moto irhabaxa, inokuthenjwa, izolile, iphrofayili iphantsi kwaye iyabiza. Izicelo zibandakanya indawo yokuthenga, izikhombisi zenqanaba lomgqomo, izixhobo zokurekhoda, izixhobo zokurekhoda ixesha okanye nasiphi na isicelo esifuna i-torque ephezulu kwiphakheji encinci.
Xa kuthelekiswa nemoto eyenzelwe ngokwesiko, i-PMSM (iMagnet esisigxina yeeMoto eziVumelanayo) inezibonelelo ezininzi, ezinje ngokusebenza kakuhle, ubomi obude, ingxolo ephantsi, ulondolozo lwasimahla kunye nohlobo olubanzi lwezantya. nayiphi na intsimi nokuba yeyamashishini, iyorhwebo nkqu nakwi-aerospace.
Egqithileyo Imagnethi yeAlNiCo
Okulandelayo: Umazibuthe weMagswitch
Indibano yeMagnet yeHalbach Array
Indibano yeMagnetic yeHalbach
I-Neodymium Magnetic Assembly
Isahluli seGridi enebhokisi
Ukubanjwa kweMagnetic Magnetic